Tag: what is viral content | Martech Zone
Tag: what is viral content
Kuyini ukumaketha ngamagciwane? Ezinye Izibonelo nokuthi Kungani Basebenza (noma Abazange)
NgoLwesine, ngo-Okthoba 2, 2014 NgoLwesihlanu, Okthoba 3, 2014 Douglas Karr
Ngokuthandwa kwezinkundla zokuxhumana, ngithemba ukuthi iningi lamabhizinisi lihlaziya yonke imikhankaso abayenzayo ngethemba lokuthi izokwabiwa ngomlomo ukuze kwandiswe ukufinyelela kwayo namandla. Kuyini ukumaketha ngamagciwane? Ukumaketha ngegciwane kubhekisa kunqubo lapho osomaqhinga bokuqukethwe beklama ngamabomu okuqukethwe okungahambiseka kalula futhi okubandakanya kakhulu ukuze kwabelwane ngakho ngokushesha ngabantu abaningi. Imoto yingxenye eyisihluthulelo -